Yaa Rabbii! Kuni JAARSOO! Gabaan guyyaa harraa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYaa Rabbii! Kuni JAARSOO! Gabaan guyyaa harraa
Yaa Rabbii! Kuni JAARSOO! Gabaan guyyaa harraa
Yaa Rabbii! Kuni JAARSOO! Gabaan guyyaa harraa uummanni kunoo akkasitti oole jedhani.
Gabaan guyyaa harraa kuni G/W/Lixaa aanaa Jaarsooti — uummanni kunoo akkasitti oole jedhani. Hanqina hubannooti moo labsii bahe hojiirra oolchuuf adeemsi jiru laafaa ta’uu?
COVID-19 state of emergency and the federal balance of power https://t.co/hny6LS76rE pic.twitter.com/2ZR3vGij36
— Kichuu (@kichuu24) April 13, 2020
Rakkoon kun Amboo qofa moo iddooma hunda jira laata?
“Ani Ogeessa Fayyaa Riifaraala Amboo hojjedhudha. Yeroo Biyyoonni addaa addaa dhukkuba Kooraanaaf afaan tokko dubbatanitti ogeessoonni Fayyaa Fayyaa Uummata isaanii eeguuf lubbuu isaanii aarsaa godhanii hojjechaa jiranii , Hospitaalli Yunivarsiitii Riifaraala Amboo hojjettoota isaarratti Daba hojjechuun mirga hojjettootaa mulqaa jira.
Bara darbe Mootummaan Sirreeffama Miindaa kan taasise ogeessota fayyaaf hanga guyyaa hardhaa ji’a 9f isoo nuu hin kaffalamiin nu dhorkanii jiru. Inumayyuu yeroo ogeessa fayyaaf faayidaan isaa eegamee hamilee itti horamuu qabu bulchiinsi Hospitaalichaa mirga hojjetaa dhiibuun ajaja Nam tokkeen “Duty” hojjettootaa sa’aatii isaan duraan argatanii hojjetan %50 gadi hirdhifamee, kan hafe ogeessi Hospitaalicha jala jiran kan “Student Clinic” hojjetan ammoo mana galaa taa’aa jechuun mirga hojjettootaa dhiibaa jiru. Hojjettoota kana keessaa ammoo firooma dhiigaa warreen qaban akka Uummata barsiisanii Aballlii argataniif haalli mijeeffamee jirutti hojjettootaa kaaniin hanga Koronaan Amboo dhufutti manuma keessan taa’aa jechuun dhorke.
Miindaa erga nuu kaffalamee ji’a 1 darbee kan jiruu fi Qophii ittisa Koronaaf waantota Ogeessa Fayyaaf barbaachisan kan akka “Glove, Mask, Alcohol, Sanitizer fi PPE” gosa kamuu kan hin jirre yoo ta’u ogeessa Fayyaa akka yaalii gahaa hin gooneef dhiiheessii meeshaa dhabamee jira.”
Guyyaan wareegamtoota Sabaa yoom irraa jalqabee yaadatama?
Dhumaatii Anolee fi Calanqoo? Wareegama Wallo ganna 400 ol itti jiru? Dhumaatii Tuulamaa nannoo finfinnee fi Salaalee?Duguuggaa Ummata Arsii Baaletti finciltan jedhanii samii fi lafaan fixan? Waraana Sowraa nyachiftanii fi deegartaniin ummata jumlaan Seerutti dargiin fixe? Lammiilee Oromoo ABO fi IFLO giddutti ganna 17 guutuu dhuman? Ummata keenna dargiin ABO deegartan jedhee Harargee fi Arsitti fixe? Ummata keenna TPLF fi OPDOn Arbaaguugutti jumlaan fixan? Gootota keenna Somaaleen yeroo garagaraa fixxe? Jaynoota keenna OPDO fi TPLF Hora harsadii fi Qiliinxotti fixxe? Fi kkf.Kun martuu wareegama qaalii ilmaan oromoo falmaa abbaa biyyummaa fi mirga namoomaaf jecha kafalan.Hardhallee itti jiru.Dhimma ulfaataa kana namni ykn paartiin tokko guyyama ufii fedhe sababa quubsaa hin taaneen labsuu fi murtessuu hin dandahu.Guyyaa Mootummaa sagalee keennaan arganne marii baldhaa oromoo hirmaachiseen murteeffanna.Haga sanii gatii qaalii kana hunda qixa laallee madda humnaa fi hamilee qabsoo taasifachaa haa yaadannu.
Kabajni guddaan wareegamtoota Sabaaf !
UAE sends aid plane to Ethiopia to assist efforts to counter